Top 10 goobaha si ay u sameeyaan & shaqeysatid lacag free online (sameeyo $10,000+ dollar bil ah | Show Top
Top 10 goobaha si ay u sameeyaan & shaqeysatid lacag free online (sameeyo $10,000+ dollar bil ah
Kuwa soo socda waa goobaha halkaas oo aad awoodo inaad si fudud lacag adigoo gujinaya ad. Goobaha in lagu bixiyo xayaysiisyada gujinaya waxaa loo yaqaan bixisay-to-click (PTC). Mareegaha sidoo kale inta badan fursadaha kale in ay lacag sameeyaan sida wada qaybsiga dakhliga iyo xawilaad siiyo.
Si aan ku bilaabo waa u fududahay. All inaad samayso waa iska diiwaan goobta. Marka lagu diiwaan aad u baahan tahay si aad u bilowdo xisaabtaada ka dibna login. Marka qortey click meesha dakhliga ama button u dhiganta. Halkan ayaa la soo bandhigi doonaa liiska xayeysiis aad. Riix ad ah ka dibna waxaad u baahan doontaa in ay sugto seconds qaar ka mid ah. Marka aad sugayay dhamaystiran su'aasha iyo aad qadarka dari doonaa si aad u dheeli.
Siyaabo kale oo ka mid ah lacagta ka soo goobahan samaynta yihiin si ay u iibsadaan adpacks qaybsiga dakhliga kaas oo ku siin doonaa laabto. Tusaale ahaan haddii aad ka iibsan adpack ah u $10 goobaha qaar ka mid ah ku siin doonaa laabto on maalgashiga by dakhliga goobaha aad la wadaago. Haddii aad ay u gudbiyaan qof goobta goobta sidoo kale bixin doonaa halkii gudbinta ama bixiso halkii marba qof kuu gudbin.
Intee in le'eg oo aad samayn kartaa?
Inta aad sameeyaan waxay ku xiran tahay inta waqti aad ku qaataan waxaa ku bilowga. Mareegaha ogolaado in aad lacag adigoo gujinaya xayeysiis laakiin sidoo kale u oggolaadaan in aad lacag habab kale oo sidoo kale. Haddii aad iska diiwaan goob kasta ka dibna awood u muteystay noqon kartaa $2000+ per goobta sida ay qasabno ad lacagta, baakad ad qaybsiga dakhliga iibsaday iyo u gudbinta.
Halkan waxaa ku soo gala ka dib koonto aan 4 maalmood ka hor.
Top Toban goobood
Waxaan ka dhigay liiska ugu sareeya toban goobood oo lagu kalsoonaan karo in ay yihiin. Waxaa jira goobo badan oo lagu gaday in ay ku andacoodaan in ay aad bixiso badan. Liiska hoos ku leeyihiin a status. Haddii aan helay lacag bangiga ii ka goobta wax ka dibna waxa ay xaaladda wax laga beddelo si ay u noqoshada xaqiijin doonaa. Goobta kasta oo meesha aan weli weli si aad u codsato lacag yeelan doontaa xaaladda la sugayo. Dhammaan goobaha la socon doonta iyo xaaladda waa laga beddeli doonaa.
Kuwa soo socda ayaa ku jirta kaalinta sida ay tayada goobta. Just guji mid ka mid ah xiriirada hoose si aad u bilowdo.
1 Paidverts Sugayo
2 Adbrook Noqoshada Xaqiijiyey
3 Traffic Monsoon Noqoshada Xaqiijiyey
4 RevHitz Sugayo
5 Adrever Sugayo
6 Mushahar dadban Sugayo
7 AdzBazar Sugayo
8 Bank Adz Sugayo
9 Lexiadz Sugayo
10 Buxvertise Sugayo
Tilmaamaha Quick oo ku saabsan sida lacagta loo sameeyo ka madan / goobaha la wadaago dakhliga ad
Register mid ka mid ah goobaha ay ka mid ah liiska kor ku xusan. Traffic Monsoon waa meesha ugu fiican ee ay u bilaabaan
Haddii aadan rabin in lacag la galiyaa goobta ka dibna ku xayaysiisyada bixisay waa hab amaan ah si ay u helaan lacag. Si fudud u tag qaybta links lacag caddaan ah ama qaybta xayeysiiska aragtida ah ee goobta oo guji xayeysiiska.
Haddii aad rabto in aad lacag halis ah ka dibna waxaad u baahan doontaa si aad u iibsato ah baakad ad qaybsiga dakhliga. Xaaladdan oo aad u baahan tahay inay la soo wareegto ilaa iyo ugu yaraan 2 goobaha ama ka badan ka mid ah liiska kor ku xusan. Goobta kastaaba wuxuu ku siin doonaa wax horumarinta sida boodhadh links gudbin.
Marka aad ku wada saxeexay heshiiska goobta kale iibsato adpack ah goobta 1aad ilaa aad saxiixday. Calan u adpack la qalabka kor uqaadida (banner iyo link referal) goobta 2aad. Hadda inaad heli doonto lacag goobta 1aad marayo barnaamijka qaybsiga dakhliga goobaha iyo inaad heli doonto lacag goobta 2aad dhex gudbinta.
Saxiix la goobaha dheeraad ah oo ka mid ah liiska ku darto iibsiga iyo ad-baakad iyaga waayo,. Sidaas waxaad ka heli doontaa gudbinta dheeraad ah iyo dakhliga share. In badan oo ad-baakad aad iibsato iyo website-yada aad saxiixdo awood u badan ayaa ku muteystay
Xusuusnow iibsigu baakad ad u eg yahay maalgelin ah oo aad loo soo celin doonaa lacagta asalka qaatay.
Si aad u iibsato adpacks waxaad u baahan tahay xisaab baayacmushtarka bixinta. Paypal waa kuwa ugu badan. Waxa kale oo laga yaabaa in aad rabtid in aad furatid xisaab la socda:
Tags: Samee lacag degdeg ah
← Shaqeysatid lacag online ka guriga la qaybsiga dakhliga Hel Bitcoins lacag la'aan ah iyo lacagaha kale ee digital maalin kasta →